TTA Mi Myanmar Font MIUI 9.2+ ထွက်ပြီ ( MIUI 9.2 နှင့် အထက်ဖုန်းများအတွက်)
TTA Mi Myanmar Font MIUI 9.2+ ထွက်ပါပြီ
MIUI 9.2 တင်ပြီး Font change လို့မရတဲ့ error များအတွက် TTA Mi Myanmar Font MIUI 9.2+ လာပါပြီ
TTA Mi Font Lite တုန်းကလိုပဲ Font 35 မျိုးပါဝင်ပါတယ်။
Mi Account မလိုပါဘူး
( ယခု TTA Mi Myanmar Font ဟာ MIUI 9.2 နှင့် အထက်ဖုန်းများအတွက်ပါ MIUI 7.2 /7.3/ 8.0/ 8.1 /8.1.2 /8.2 /8.5/ 9.0/ 9.1 အထိဖုန်းတွေ အတွက် TTA Mi Font Lite သုံးပေးပါ https://play.google.com/store/apps/details?id=tta.mifont.lite )
၁။ Fontchange ကိုနှိပ်ပါ မိမိနှစ်သက်သောဖောင့်ကို နှိပ်ပါ
၂။ System Font ကိုနှိပ်ပါ
၃။ Default အောက်က ပုံမပါတဲ့ဖောင့်ကိုတချက်နှိပ်ပေးပါ
၄။ Apply နှိပ်ပြီး reboot နှိပ်ပါ
၅။ ဖုန်းပါဝါပိတ်သွားပါလိမ့်မယ် ပြန်တက်လာချိန်မှာ မြန်မာဖောင့်
၂။ ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် Mi Account ဖွင့်နည်း
၃။ China ROM လား Global ROM လားစစ်ဆေးနည်း
၄။ Facebook Link နှင့် Browser မြန်မာစာ မှန်အောင်ချိန်နည်း
၅။ ဖောင့်ချိန်းမရပဲ ပြန်ပြန်ထွက်သွားခြင်း error အတွက် theme clean ခလုတ်
၆။ Google App ဗားရှင်းအလိုက်ထည့်သွင်းနည်းများ
၇။ UC MINI Browser နှင့် Frozenkeyboard များ ပါရှိပါသည်။
အောက်က မိမိနှစ်သက်ရာ ဆာဗာ များ မှာနှိပ်ပြီးဒေါင်းနိုင်ပါပြီ
( ယခု TTA Mi Myanmar Font ဟာ MIUI 9.2 နှင့် အထက်ဖုန်းများအတွက်ပါ MIUI 7.2 မှ 9.1 အထိဖုန်းတွေ အတွက် TTA Mi Font Lite သုံးပေးပါ https://play.google.com/store/apps/details?id=tta.mifont.lite )
( သင်ဆရာ မြင်ဆရာ အားလုံး နှင့် Font Developer များ အာလုံးကိုအထူးကျေးဇုးတင်ရှိပါတယ် )
Posted by U YarZar Nyi at April 16, 2018
Labels: TTA Mi Myanmar Font MIUI 9.2+
SAMSUNG Phones 7.0 , 7.1.1 , 7.1.2 များအတွက် မြန်မာဖောင့် TTA SAM Font7(update)
SAMSUNG Phones 7.0 , 7.1.1 , 7.1.2 များအတွက် မြန်မာဖောင့်
1.2 update fix
* Fixed Facebook Comment Myanmar Font
* 7.1.1 , 7.1.2 Can Install
* added2new Font ( total 14 )
* Than Toe Aung​
Tested with J5 Prime , S7 edge
No Need Command
မတ်လ (၁၈) ရက်နေ့ ရန်ကုန်မှာ Basic to Advanced (၄) ရက်တိုအတန်းရှိတယ်နော်
Labels: TTA SAM Font7(update)
Vivo V7 Plus အတွက် ဆိုင်မှာ userlock လာဖြေလျှင် 9008 ကနေ pin pattern password ဖြေလို့ရနိုင်တဲ့ bat ဖိုင်လေးပါ
DL @ http://www.mediafire.com/?46xfyr4m5x8fi88
Labels: Vivo V7 Plus Userlock Remove 9008 bat ဖိုင်
Mi PC Suite 3.0 ENG သုံးပြီး White recovery mode ကနေ Firmware တင်နည်း
မင်္ဂလာ နှစ်သစ်သင်္ကြန်မှာ အားလုံး စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ Than Toe Aung Mobile Phone Services & Training Mandalay မိသားစုမှ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။
Download @ Mi PC Suite 3.0
Labels: Mi PC Suite 3.0 ENG
TTA Mi A1 Oreo (Android 8) Root + Myanmar Font
*ဖုန်းကို adb mode ကနေပဲချိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
*root မလုပ်ခင် Security Patch အရင်ကြည့်ပါ
မိမိဖုန်း Security နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ root လုပ်ပါ
နောက်ဆုံးSecurity mar ထိထည့်လုပ်ထားပါတယ်။
Mi A1 root.bat ကိုဖွင့်ပြီး root လုပ်ပါ။
Root ရရင် Zawgyi Font Change နိုင်ပါပြီ
Download bat @ http://www.mediafire.com/?5m6bgtj5jck96vk
Download Latest Fastboot Firmware
Thanks to JWK Myanmar
Labels: Root + Myanmar Font
Labels: Huawei Notification Error Fix Tool
LOLO-Love4 Flashtool Firmware.OK
Device Brand : Love 4
Device Model : Love 4
Device IntName : Love 4
Device Compile : 9/11/2017 6:09:48 AM
Device ExtInfo : Love 4
KENBO E111 နဲ့ KENBO O51 အတွက် Scatter နဲ့ Download Agent DA
KENBO E111 နဲ့ KENBO O51 တွက် Scatter နဲ့ Download Agent DA တိုင်ပတ်နေတဲ့
FRP ဘာညာကွိကွ Dongle နဲ့ဖြည်တာတောင် DA တောင်းတယ် DA Error တက်တယ် ခုတော့
တက်သေးလားတောင်းသေးလား မသိပါ ဘာ Dongle ညာ Dongle ဒေက Support ပြီလဲတော့မသိဘူးးဗျာ
13/12/2017 ထဲကတင်ထားတာ အသုံးလိုမယ်ထင်ရင် Down ထား 1mb ကျော်ကျော်လေးရယ်
KENBO O51 >>့Download Here
KENBO E111 >> Download Here
Labels: Download Agent DA
Mi Account Disabled Firmware Maker
Mi Account disabled firmware လုပ်ဖို့အတွက် exe လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
#exe ဖိုင်ကိုပဲ တစ်ခါတည်း နှိပ်ပြီး run နိုင်သလို...
.exe ကို Winrar နဲ့ ဖြည်ချပြီး အထဲက run.bat ကို ကြည့်ပြီးတော့လည်း command ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်...
( command ကရှင်းရှင်းလေးပါ :D )
Xiaomi firmware တွေကို ဖြည်ချပြီး system.img ရှိတဲ့ ဖိုဒါထဲကို အခု exe ကိုထည့်ပြီး နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး
Mi Account Disabled Firmware ကို ဖုန်းထဲ ပြန် Flash တာကိုတော့ ပြောစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်ဗျ.. :D
-- ရမရလည်းဆိုတာလေးတွေလည်း ment ပေးသွားကြဦးဗျ...
အနည်းဆုံးတော့ လုပ်နည်းလေးတော့ သိသွားရင် ကျေနပ်ပါပြီဗျာ...
Posted by U YarZar Nyi at January 29, 2018
Labels: Mi Account Bypass Firmware Maker
MEIZU M6 note A_Stable တင်နည်း
Flyme 6.1.4.6A Meizu M6 Note
အရင်ဆူံးအဲဒိlinkကနေdownပါ 2Gb နိးနိးdownရပါတယ်
downရတဲ့ဖိုင်nameကြည့်ပါ Update.zipလို့ပေးထားရမှာပါ မဟုတ်ရင်renameပေးပါ
ပြိးရင် တစ်ချက်နှိပ် updateလို့ပေါ်လာမယ် wipe app data အမှန်ခြစ် update နှိပ်ရဘိ app တွေမပျောက်ချင် storage n backup မှာ backupယူ
အဲဒိအတွက် အရင်ဆုံး fingerprint n security သွား flyaccထည့်ပြိး root permission on
flyacc passထည့်rebootကျသွားမယ် ပြန်တက်လာရင် အရင်ဆူံး kingroot appရယ် ,tta font fix app down root permissionပြန်သွားkingrootကို permission on ပြိးkingrootအလယ်ဝိုင်းနှိပ်rootပါ internetဖွင်ထားဖို့လို rootပေါက်သွားရင် fo အဲဒိfont fix app က်ိုpermissionပေး ပြိးရင် fonfix appထဲဝင် fixကိုနှိပ် rebootကျသွားမယ် ပြန်တက်လာရင်ရဘီ
tta font fix app
Google App သွင်းရခက်နေတဲ့ China ဖုန်းတွေအတွက်ပါ Root မလိုအပ်ပါဘူး Android Kitkat မှ nougat ထိရသွင်းလို့ရပါမယ်။
၁။ မိမိဖုန်ဗားရှင်းကို အောက်မှာတခါတည်း Show ပေးထားပါတယ်
မိမိ ဖုန်းဗားရှင်းအလိုက် ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်သွင်းပါ။
၂။ အပေါ်ဆုံး Google Account Manager ကနေ အောက်ဆုံး Playstore ထိအစဉ်လိုက်သွင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ် အားလုံးသွင်းပြီးရင်တော့ဖုန်းကို Reboot ချပေးပါ
၄။ ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာ Playstore ကိုဖွင့်လိုက်ပါ Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ ဆိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Accept ဆိုတာပေါ်ပါမယ် အဲဒါနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
၅။ အကောင့်ထည့်တဲ့ နေရာမရောက်သေးခင်မှာ Checking info မှာ
နည်းနည်းကြာပါတယ် (အင်တာနက်ဖွင့်ထားရပါမယ် အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းလျှင်လည်းကြာပါတယ်)
အကောင့်ထည့်ပြီးလျှင်တော့ Done ပါပြီ :D (Y)
DL Mediafire @ http://www.mediafire.com/?qs8zeqo1aoa6lyj
DL pCloud @ http://pc.cd/JHd7
Posted by U YarZar Nyi at January 14, 2018
Labels: MEIZU Firmware
MCT Backup Firmware
MediaPad_T1_8.0 MCT Dongle Backup
H30 C00 MCT Dongle Backup
C8817D MCT Dongle Backup
Labels: MCT Backup Firmware Collection
9008 မှ Block0 Direct ရေးနည်း
Download Agent DA
Error Fix Solution
MCT Backup Firmware Collection
Mi Account Bypass Firmware
Mi Account Bypass Firmware Maker
Mi PC Suite 3.0 ENG
MIUI9Bypass Firmware
Root + Myanmar Font
TTA SAM Font7(update)
True Smart 4.0 max V3.0.5 Network Unlock File
True Smart 4.0 max V3.0.5 Network Unlock File ပါ။ ပေးထားတဲ့ File လေးကို Download ဆွဲ ပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းFlash ...
Y625-U32 Board Firmware
Download Link ကြော်ငြာလေး နည်းနည်းဝင်မယ်နော် အမျိုတို့
KENBO E111 နဲ့ KENBO O51 တွက် Scatter နဲ့ Download Agent DA တိုင်ပတ်နေတဲ့ FRP ဘာညာကွိကွ Dongle နဲ့ဖြည်တာတောင် DA တောင်းတယ် DA Error တက်တယ်...
Y535-C00 ( 9008 FIRMWARE )
Credit to MPPG Y535 C00 firmware တင်ဖို့ အခက်ခဲဖြစ်နေလား လွယ်ပါတယ် Volup+Voldown တွဲဖိပြီးUSB ထိုးလိုက် 9008 mode ရောက်သွားလိမ့်ယ်...
Mi Account disabled firmware လုပ်ဖို့အတွက် exe လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် # exe ဖိုင်ကိုပဲ တစ်ခါတည်း နှိပ်ပြီး run နိုင်သလို... .exe...
LOLO- Love 1 Flashtool Firmware .100%OK
LOLO- Love 1 Flashtool Firmware.100%OKလေး စမ်းပြီးသာ Flashtool Firmware လေးပါ လိုအပ်သူများအောက်ကလင့်မှာဒေါင်းယူနို...
Maxxcall Firmware All Model
💥 Maxxcall Firmware ပေါင်းစုံပါ 💥 https://drive.google.com/open… (maxxcall M Note) https://drive.google.com/open… (maxxcall M...
Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2016 Device Brand : Love4Device Model : Love4Device CPU : MT6580 Devic...
Huawei Honor 4X ( Che2-UL00 ) Board Firmware
လိုအပ်သူများအတွက်အခမဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ Download Link ကြော်ငြာလေး နည်းနည်းဝင်မယ်နော် အမျိုတို့
OPPO -R831K Display Error Fix.OK
OPPO -R831K Display Error Fix File လေးလိုအပ်သူများအောက်ကလင့်မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ ...
TTA Mi Myanmar Font MIUI 9.2+ ထွက်ပါပြီ ======================== MIUI 9.2 တင်ပြီး Font change လို့မရတဲ့ error များအတ...
TTA Mi Myanmar Font MIUI 9.2+ ထွက်ပြီ ( MIUI 9.2 န...
SAMSUNG Phones 7.0 , 7.1.1 , 7.1.2 များအတွက် မြန်မ...
Mi PC Suite 3.0 ENG သုံးပြီး White recovery mode က...
KENBO E111 နဲ့ KENBO O51 အတွက် Scatter နဲ့ Downloa...
9008 မှ Block0 Direct ရေးနည်း Attila Board Firmware BossStyle Box Crack Coolpad Download Agent DA EMMCအလွယ်​​ရေးနည်း Error Fix Solution FRP Huawei Huawei Notification Error Fix Tool Ilovfa Firmware KIMFLY Leagool LOLO Maxxcall Firmware MCT Backup Firmware Collection MEIZU Firmware Mi Account Bypass Firmware Mi Account Bypass Firmware Maker Mi Firmware Mi PC Suite 3.0 ENG MIUI9Bypass Firmware MOBILO My Phone NEWINGS Oppo Root + Myanmar Font SINGTECH. TEENO True Smart TTA Mi Myanmar Font MIUI 9.2+ TTA SAM Font7(update) Vivo V7 Plus Userlock Remove 9008 bat ဖိုင်
ကိုရာဇာ(၀ါးခယ်မ). Powered by Blogger.